अनलाइन पत्रिकामा स्पाइडरमैन ! | शहरबाट शब्दहरु
« घिमिरे र काजी, कसले मार्ला बाजी ?
मामाभान्जी छुरा र सितारामका कुरा »
अनलाइन पत्रिकामा स्पाइडरमैन !	२३ पुस, २०७१ तद्अनुसार ७ जनवरी, २०१५ (बुधबार) । यस्तै हो सूर्य उदाउँछ र अस्ताउँछ । सूर्य देखिएको केही घण्टापछि उठ्ने बानीले म अल्छी छु की भन्ने लाग्छ । तर राति सुत्ने समय ढिला हुनाले मन बुझाउँछु । हेर्दाहेर्दै बुधबार पो भइसकेछ ।
आज अलि चाँडै कार्यालय पसेँ । कामको चापका कारण आफूले आफूलाई स्याबास भनेर धाप मार्न सकिएको छैन । बाँकी कामहरूको एकातिर तनाव थियो, अर्कातिर फेरि नयाँ योजनाले च्याप्पै समाएको थियो मलाई ।
आजपनि भेटघाट भइरह्यो । पुराना एकजना भाईसँग आज भेट भयो । करिब ५ वर्षअघि लेखिएको सानो नोटबुक भेटिएको थियो । नोटबुकमा एउटा नम्बर पाएँ । को रहेछ भनेर उत्सुकता जागेपछि खोजेँ र पता लगाएर छाडेँ । उनैसँग कार्यालयमा बोलाएर भेट भयो ।
अस्तिमा इनारमा खस्ने बालक, उसलाई बचाउने र उनका परिवारसहित अनलाइन पत्रिकाको कार्यालयमा आएको थियो । यसलाई समाजिक कथा बनाउन सकिन्छ की भन्ने लागेको थियो । इनारमा खसेका बालकलाई निखिल र स्पाइडर मैन भनेर टोलवासीले भन्न थालेका छन् । फेरि आमालाई निखिलको मम्मी र स्पाइडर मैनको मम्मी भनेर चिनिन थालेका रहेछन् ।
यता फेरि बचत संघमा नेतृत्व गर्न तयार घिमिरे र काजीका कुराकानीलाई यसपटक हामीले सहकारी पत्रिका पृष्ठमा समेट्ने भएका छौं । दुवैसँग सहकारी सम्वाद गर्दा उत्तिकै उत्साहित रहेको अनलाइन पत्रिकाकर्मीको अनुभव रहेको थियो ।
अनलाइन पत्रिकाकर्मी साथीहरू आज व्यस्त देखिए । आफ्नो डेडलाइनका कारण उनीहरू पनि दबाब छ नै । जे होस् सक्रिय साथीहरूको सक्रियतालाई सलाम । हतारमा बिना सम्पादन जे लेखियो त्यही फाइनल हुने यो दैनिकी संस्करणको मेरो नियमित लेखाईमा धेरै कुरा छुटन सक्छन् । अहिले यतिमात्रै ।
This entry was posted on जनवरी 7, 2015 at 1:20 अपराह्न and is filed under दैनिकी. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.